Nigerian Army Ranks - Wona Yakazara Rondedzero yeNigerian Mauto Mauto Pano: Yazvino Chikoro Nhau
Nigerian Army Ranks - Wona Yakazara Rondedzero yeNigerian Mauto Mauto Pano
Akaiswa mukati Articles by Edhiyo Vashandi musi waJune 18, 2021
Iwo emauto emauto eNigeria ndiwo chiratidzo chemauto chinoshandiswa neNigerian Armed Forces. Pazasi pane runyorwa rwevose veNigerian Mauto Mauto mune avo akateedzana. Nzvimbo yeuto ine kana kupatsanurwa kuita zvikamu zviviri, Vakatumirwa uye Vasina-kutumwa maofficial.
Bazi rega rega rebasa remauto eNigerian ane chiratidzo chakabatana icho chinozivikanwa nacho. Iyo Nigerian Army logo ndiyo imwe chiratidzo inoipatsanura kubva kumauto emhepo kana navy.
Isu tichatsanangura zvinorehwa negondo, chiratidzo chenyeredzi uye zvinoreva zvinyorwa zveArabic zvichinyora pazasi pechiratidzo.
Gondo pane logo yeuto rinoreva nyasha nesimba re Mauto eNigeria. Senge nzira inokwira gondo pamusoro nekurwisa zvine mutsindo, ndiwo marwadziro anoita varwi veNigeria pakurwisa hondo.
Mucherechedzo weyeredzi unomiririra kubatana kweNigeria serudzi rumwe rusingaenzanisike. Izvi zvinogona kuteverwa kumashure kuna 1914, panguva yekubatanidzwa.
Iyo yeyero uye nhema dema pane iyo nyeredzi inomiririra maSouthern uye Maodzanyemba Anodzivirira ayo akaumba imwe Nigeria.
Chinyorwa cheArabic muNigerian Army logo kana ichinyorwa muChirungu zvinoreva 'Kukunda kunobva kuna Mwari chete'.
Ruvara rutsvuku pamureza unomirira kutyisidzira uye zvinhu zvevavengi nepo dema richimiririra vatasvi vemabhiza veNigerian nemauto.
Vakatumirwa Mahofisi (CO): Ndiwo mamaneja, vanogadzirisa matambudziko, vanokurudzira vanokurudzira uye vanoronga vanotungamira Vakanyorerwa Masoja mumamiriro ese ezvinhu. vane basa rekutungamira uye kurovedzwa kunyoreswa.
Asina kutumwa Officer (NCO): mukuru wemauto anopiwa masimba kuburikidza nemumiririri, asi iye haatariswe sehunyanzvi.
Mauto eNigerian Mauto eVakatumirwa Mahofisi
Mauto eNigeri ane gumi nematanhatu emahofisi anotumirwa ayo Munda Marshal ndiyo chinzvimbo chepamusoro pakati uye Yechipiri Lieutenant chinzvimbo chepasi. Pazasi pane izere runyorwa rwe NA akapihwa mahofisi mahofisi:
Munda Marshal - ★ ★ ★ ★ ★ [5 Nyeredzi]
General - ★ ★ ★ ★ [4 Nyeredzi]
Lieutenant General - ★ ★ ★ [3 Nyeredzi]
Major General - ★ ★ [2 Nyeredzi]
Brigadier General - ★ [1 Nyeredzi]
Yechipiri Lieutenant - [Nzvimbo Yakaderera Zvikuru]
Mauto eNigerian Anomira Kune Asina-kutumwa Mahofisi
Iko kune masere masere muNigerian Army kune vasina-kutumwa maofficial. Idzo dzakanyorwa pazasi:
Warrant Officer Kirasi I
Warrant Officer Kirasi II
Kutora - [Nzvimbo Yakaderera kwazvo]
Nigerian Army Portal naportal.com.ng Kunyoresa 2021 Ona Maitiro Ekushandisa
Maona Rondedzero Yevapfupi Vakasarudzwa 2021 Nigerian Army 81RRI Kugadziridza
81RRI MaNigerian Mauto Akapfupikiswa Vadzidzi 2021/2022 yePamberi-Kuongorora
Mauto eNigerian 81RRI Akapfupikiswa Vanokwikwidza 2021/2022 Tarisa Yakazara Rondedzero
Nigerian Army Nhau Nhasi 2021 Dzazvino Nigerian Mauto Nhau Nyamavhuvhu
Nigerian Army 81RRI Kuongorora Zuva 2021 uye All Examination Centers
Nigerian Army 81RRI Kuchengeta 2021 Kunyorera Unganidzo www.ims.army.mil.ng
Tags: Mauto eNigerian, Mauto eNigerian Ranks
« Nei Kutangisa Bhizinesi Rekumba-Rinogona Kuva Ruzivo Rukuru
MBA muRuzivo Technology 2021 Details, Syllabus neMabasa »
MTN Scholarship Scheme 2021 yeVose Vadzidzi veNigerian
MasterCard Nigeria Kuchengetedza 2021/2022 Mafomu Ekushandisa Portal
Netcom Africa Jobho Kubatira 2021 Tarisa Dzazvino Chinyorwa Chekushandisa
International Sangano Rekutama Jobho Portal 2021 www.nigeria.iom.int
Yepasi rose Sangano reKufambisa Ekutora 2021 Kunyorera Portal
Tarisa Netcom Africa Limited Job Vacancy Portal 2021 www.netcomafrica.com
Netcom Africa Limited Kuchengeta 2021/2022 Kunyorera Fomu Portal
KENPOLY Tumira UTME Mibvunzo Yakapfuura 2021 & Mhinduro PDF Download
Oracle Nigeria Jobho Portal 2021 www.oracle.com
FCC Ibadan Post UTME Fomu 2021/2022 Yedzidzo Session
FCAHPTVom ATBU Tumira UTME / DE Fomu 2021/2022 Session
UMYU Kunyoresa Mirayiridzo 2021/2022 Yedzidzo Session yeFresher
FCC Ibadan HND Yekugamuchira Fomu 2021/2022 Session Kunyorera Maitiro
Spiritan University Chikoro Mari 2021/2022 yeVatsva neVanodzoka Vadzidzi
Maodzanyemba Akadziva kumadokero University Cheka Mugumo Mako 2021/2022 Dhipatimendi Cheka Kunze Point